Topic:Color PsychologyColour Psychology
အားဖြင့် Posted: Desola ဒီဇင်ဘာလ 3, 2012
2 မှတ်ချက်များ အပေါ် "Color Psychology in Business Branding"
Harmony Major | ဒီဇင်ဘာလ 6, 2012 တွင် 11:31 ညနေ | ပြန်ကြားချက်
Excellent positioning, great information, and useful specificity. ကျေးဇူးတင်ပါသည်!
Desola | ဒီဇင်ဘာလ 11, 2012 တွင် 11:05 ညနေ | ပြန်ကြားချက်